Obbo Baqqalaa Garbaan wabiin gadi lakkifamuufi - BBC News Afaan Oromoo
Obbo Baqqalaa Garbaan wabiin gadi lakkifamuufi
Goodayyaa suuraa Baqqalaa Garbaa wabiin gadi dhiifamuufi
Manni Murtii Waliigalaa Federaalaa dhaddachi afraffaa, dura taa'aa itti aanaa dhaaba mormituu Kongirasii Federaalistii Oromoo obbo Baqqalaa Garbaan wabiin akka gadi lakkifaman murteesse.
Obbo Baqqalaan mirga wabii qarshii kuma 30'tiin, mana hidhaati bahani dhimma isaanii ala taa'aanii akka hordofaniif murtaa'uu isaa abokaatoon isaanii obbo Abduljabbaar Huseen BBC'tti himanii jiru.
Gaaffii mirga wabiin gadhiifamu obbo Baqqalaa Garbaa, Manni Murtii Olaanaa Federaalaa, yoo gadhiifaman biyyaa bahuu danda'u, nama baay'ees kakaasuu danda'u jechuun kuffisuu isaa obbo Abduljabbaar himaniiru.
Kana booda gara mana murtii waliigala Federalaatti ol-iyyannoo dhiyeessine jedhu.
Manni murtii waliigalaa Federaalaas, dhaddacha har'a ganama ooleen, ''Seerichi hin dhorku, yoo bahanis waan akkasi raawwachuu isaaniif ragaan hin jiru,'' jechuun wabiin akka gadi dhiifaman murteessuu isaa obbo Abduljabbaar nutti himaniiru.
Maatiin isaanii qarshii barbaachisuu qopheessaa kan jiran yoo ta'u erga mana murtiitti dhiyaate booda gad-lakkifamu, ''yoo haalli addaa hin jiraatiin har'uma sa'aatii booda ta'u danda'a," jedhan.
Akkaatuma gaaffii abukaatoo isaaniirraa dhiyaateen, obbo Haayilamaariyaam Dassaaleny, obbo Lammaa Magarsaa, Dr. Abiiy Ahimad, obbo Abbaaduulaa Gammadaa fi kantiibaa magaalaa laga Xaafoo laga daadhii adde Caaltuu Saanii ragaa ittisaa obboo Baqqalaa Garbaa ta'uun onkoloolessa 27 hanga 29'tti mana murtiitti dhiyaatanii akka ragaa bahan mana murtiin ajajamani turan.
Obbo Abduljabbaar raga kanarraa waan lama eegna jedhu; ''tokkoffaa yoo dhiyaatanii ragaa bahan olaantummaa seeraa kabajuun fakkeenya ta'u, haala jirus adda baasani ni dubbatu. Yoo kan hafan ta'e olaantummaa seeraaf dantaa akka hin qabne mul'isa, lamaanuu galmee keenyaaf faayidaa olaanaa qaba," jedhu.
"Ragaa bahuun aangawoota kanneenii, ragaa ittisaa haga yoonaa dhiyeessine nuuf cimsa," jedhu.
Murteen mana murtii Federaalaa dhaddacha afraffaa, wabiidhaan akka mana hidhaati bahan kan murteesse obbo Baqqalaa Garbaa qofa akka ta'eefi kanneen isaan waliin himataman hin ilaallatu.
Gaarreen Baalee ji'a tokko keessatti yeroo lamaffaaf gubachaa jiru
'Balichi qormaata guddaa ture, garuu irra aanne' Obbo Tewelde Gabramaariyaam